6-walxaad oo ninkaagu uusan waliga kugu ilaabi doonin!..Baro gabaryahay. | Gaaloos.com
Home » galmada » 6-walxaad oo ninkaagu uusan waliga kugu ilaabi doonin!..Baro gabaryahay.
6-walxaad oo ninkaagu uusan waliga kugu ilaabi doonin!..Baro gabaryahay.
Ma dooneysaa gabaryaheey in aad ogaato waxa uu jecel yahay ninkaada marka kulanka naxariista lagu jiro ? hadaba qaado talooyinkaan .
1- Xamaasad(Hamuun) ninka aad ayuu u jecel yahay in haweeneyda ay ahaato mid u kulul sameeynta kulanka , hana dareensiin in aad kulanka u sameyneyso isaga dartiis kaliya .
2- Khiyaao Cusub : ninka waxa uu jecel yahay in naagtiisa uu ka dareemo in ay diyaar u tahay in ay isku dayayso marba in hab cusub ay nolosha sariirta ula qeybsaneyso , isku soo duub muhiimada waxa ay tahay in haweeneyda soo hindisto dareemo cusub oo uu horay kaaga arag .
3- Amaan : inta badan waxaan aaminsanahay in haweeneyda kaliya tahay midda u baahan amaanta ee sidoo kale ninka waa uu jecel yahay ee u samee si gudashada shaqadiisa u ahaato mid aad u sareeysa .
4- In Meelaha Ka Dhiman U Buuxiso : ninka waxa uu jecel yahay in haweeneyda ay ku tiraahdo oo ay u sheegto habka ay u dooneyso in ciyaarta u dhacdo xayeysiin waxa ay ku leedahay waa hubaal haddii aad hagto in arintaas uu kaaga mahad celinayo kana helayo dhiira gilin adna aad aad u macaansan doonto.
5- In Ay Isku Kalsoon Tahay : ninka aad ayuu u jecel yahay in haweeneyda ay isku kalsoon tahay xishood la`aan ay wax ula wadaagi karto ninka muhiimada waxa ay tahay ragga ma jecla in mugdi ay ku sameeyaan ciyaarta .
6- Ka Fikiridda Kulanka Sariirta : haweeneyda ka fikirta kulanka sariirta waxa ay si wacan u garaneysaa sida ay ninkeeda ugu farxad gilin karto sariirta , in aad u muujiso qaab xariifnimo ah in aad rabto in aad hawada wada gashaan xilli isaga oo daawasho Tv-ga ah ku jira , ugu dambeyn caqliga ayaa ah isha.
Title: 6-walxaad oo ninkaagu uusan waliga kugu ilaabi doonin!..Baro gabaryahay.